I-china iphinda isetyenziswe kwakhona ngeeMailer mveliso kunye nabathengisi | NGOKUPHAKAMILEYO
Kwimveliso yentengiso yamanye amazwe, imfuno yokuhanjiswa okucacileyo iyakhula ngamakhulu, kodwa bambalwa abantu abahoya ifuthe elibi lale nkunkuma ingavuselelekiyo emhlabeni nakwimeko esingqongileyo.
Ukuza kuthi ga ngoku, i-EPP ivelise iiplastiki ezinokuphinda zisebenze ukunciphisa umngcipheko oqhubekayo kwindalo esingqongileyo. Iingxowa zethu ezinokuphinda zisebenze zinokurisayikilisheka ngoovimba bevenkile kunye nokugcina amandla omeleleyo kunye nokusebenza kokugqojozwa. Zisetyenziswa ngokubanzi ukupakisha irhasi kunye nombane iimveliso ezifana mobile phone.
Egqithileyo Iingxowa ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze kwakhona
Okulandelayo: Ukuphinda usebenze kwakhona kwifilimu